RASMI: Samir Nasri oo markale dib ugu laabtay horyaalka Premier League (Kooxdee ayuu ku biiray?) – Gool FM
RASMI: Samir Nasri oo markale dib ugu laabtay horyaalka Premier League (Kooxdee ayuu ku biiray?)
(Premier League) 31 Dis 2018. Laacibka reer France ee Samir Nasri ayaa markale dib ugu laabtay horyaalka Premier League, kadib markii uu horey ugu soo ciyaaray kooxaha Arenal iyo Man City.
West Ham United ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay sameysay saxiixa laacibka reer France ee Samir Nasri, kadib markii ay ku heleen beeca xurta ah.
Kooxda West Ham ayaa war rasmi ah ay ay ku soo qortay website-keeda iyo dhamaan shabakadaheeda rasmiga ah ee Twitter iyo Facebook waxay ku xaqiijisay in Samir Nasri ay kula wareegtay hehiis beeca xort ah ee gaarsiisan ilaa iyo mudo dhan 6 bilood, taasoo ka dhigan inay tahay ilaa iyo dhamaadka xili ciyaareedkan.
West Ham ayaa sidoo kale xaqiijisay in heshiiskan 6 bilood uu qeyb ka yahay shuruurd ah in marka uu soo idlaado ay ka saxiixan karto heshiis dhan mudo labo sano ah, hadii ay ku wada heshiiyaan labada dhinac.
Samir Nasri ayaa u xiran doona kooxda West Ham No. 18-aad, wuxuun kooxdiisa reer England ka shaqo bilaabi doonaa isla bilawga bisha Janaayo.
Samir Nasri ayaa khibrad badan ka heysta horyaalka Premier League, isagoo soo xirtay maaliyada kooxda Arsenal bilowgii xirfadiisa ciyaareed ee kubada cagta ka hor inta uusan u dhaqaaqin Manchester City.
RASMI: FA-ga England oo ganaax dul dhigay macalinka kooxda Arsenal Unai Emery